Ukulungiswa okukhawulezileyo kweKhowudi yeMpazamo 0x0003 yeeWindows 7, 8 kunye ne-10.
Disemba 7, 2020 by IJaveria Dinar
Naluphi na uhlobo lwesoftware ejongene namaxesha athile anokubangela ukwenzeka kweempazamo ezithile. Ngokukwanjalo, abasebenzisi Windows 10 isoftware yenkqubo nayo ijongene nekhowudi yempazamo 0x0003. Impazamo ikwabizwa ngokuba yimpazamo yamava eGeForce.
Umyalezo wempazamo yinto efana nale, “Kukho into engahambanga kakuhle. Zama ukuphinda uqalise ukusebenza kwePC yakho kwaye emva koko uqalise amava eGeForce. Ikhowudi Yempazamo: 0x0003 ”.
Impazamo ikwabangela isithintelo ekufumaneni amanqaku adityaniswe namava e-NVIDIA abangela ukuba yonakalise. Umcimbi uxeliwe Windows 7 kwaye Windows 8 njenge Windows 10.
Isizathu sokuvela kweKhowudi yeMpazamo 0x0003
Iindlela zokuLungisa iKhowudi yeMpazamo yeGeForce 0x0003
Nyanzela ukuqala kwakhona kweeNkonzo zeNvidia
Vumela iNvidia Telemetry Service ukuba isebenzisane neDesktop
Phinda ufake izixhobo zeNvidia
Lungisa ingxaki yeAdapter yenethiwekhi ngeWinsock Reset Command
Hlaziya uMqhubi weGraphics yeNvidia kuhlobo lwamva nje
Ukwenza iAkhawunti yoMsebenzisi eNtsha
Ezinye zezizathu ezinokubangela le mpazamo kukungasebenzi kwezinye zeenkonzo zeNvidia, umqhubi weNvidia wonakele, ingxaki yeadaptha yenethiwekhi, umqhubi weGPU uyahambelana nohlaziyo lweWindows lwamva nje, kunye nokunye.
Ezinye zeenkonzo zeNvidia ezifunekayo zinokukhubazeka ezinokubangela le mpazamo. Ke isisombululo kule meko siya kuba kukuqala kwakhona kokunyanzelwa kweenkonzo eziphambili zeNvidia njengeNvidia Local System Container, iNvidia Network Service Container, iNvidia Display Service.
Kumyalelo wokubaleka iwindow, chwetheza msc kwaye ucofe u-Enter ukuvula iWindows Services application
Ukusuka apha cofa ekunene kwenye kuzo naziphi na iinkonzo kwaye ukhethe ukuqala kwakhona iinkonzo zeNvidia.
Enye into ekufuneka uyenzile kukuqinisekisa ukuba iinkonzo zeNvidia Telemetry ziyasebenza kwaye zikwimo yokusebenzisana nedesktop.
Chwetheza iqhosha leWindows + R ukuze ufumane iinkonzo screen ukufumana Isiqulatho seNvidia Telemetry kwaye ucofe ekunene ukukhetha Properties.
Thepha Ngena tab kwaye uqiniseke Vumela inkonzo ukuba inxibelelane nedesktop ihlolwe. Cofa Faka iqhosha.
Ukuba ezinye izinto zeNvidia zonakele, unokhetho lokufaka kwakhona zonke izinto zalo. Oku kunokulungisa impazamo.
Kwiwindows yomyalelo wokubaleka, chwetheza cpl eya kuvula iiNkqubo kunye neeMpawu zefestile.
Khipha zonke iinkqubo zeNvidia ngokukhetha nganye nganye.
Ukukhutshelwa kweGeForce kwakhona kuya kukhuphela ngokungagqibekanga kwaye kufakele iinguqulelo zamva nje zeedrive ezingekhoyo. Ngaphambi kokuba wenze le nkqubo, qala ikhompyuter yakho kwakhona.
Kuhlala kunjalo emva kokuba kukhutshiwe; Kuya kufuneka uphinde uqalise inkqubo yakho ukuze usebenze ngokuchanekileyo kohlaziyo. Oku kuyakuqinisekisa ukuba ikhowudi yempazamo yamava eGeForce 0x0003 isusiwe.
Unokusebenzisa kwakhona i-Winsock Reset ukuyalela ukuseta kwakhona iadaptha yenethiwekhi kulungelelwaniso olungagqibekanga ukubona ukuba ingalungisa ikhowudi yempazamo yamava eGeForce 0x0003.
Emva kokucinezela iWindows + R, chwetheza cmd, kwaye ucinezele Ctrl + Shift + Enter ukuvula i-Command Prompt njengo-Administrator.
Emva koko unokuthayipha lo myalelo 'netsh winsock' ukusetha kwakhona kwiWindows Command Prompt, kwaye ucofe u-Enter ukwenza lo myalelo wokusetha kwakhona iadaptha yenethiwekhi.
Ungavula uMphathi weDivayisi Windows 10. Cinezela iqhosha leWindows + X, kwaye ukhethe umphathi weDivayisi ukuyivula.
Yandisa iiAdaptha zokubonisa kwaye ucofe ekunene ikhadi lakho leNvidia Graphics ukukhetha uHlaziyo lomqhubi ukuze ulihlaziye kuhlobo lwamva nje.
Oku kufuneka kube yindawo yakho yokugqibela ukuba zonke ezi ngcebiso zingasentla zisombulule lo mbandela. Kuya kufuneka uzame ukwenza iakhawunti entsha yomsebenzisi ngamalungelo olawulo emva kokucima zonke izicelo ezinxulumene neNvidia kunye nabaqhubi. Emva kokwenza njalo, faka abaqhubi kwaye ujonge ukubona ukuba umcimbi uyaqhubeka na.
Jonga ngakumbi malunga: Ikhowudi yempazamo 0xc0000005
Ezi zezinye zeengcebiso zokulungisa umba wakho. Ndiyathemba nokuba yeyiphi na eyokusebenzela. Unokuzama ngaphezulu kwesinye sezi ndlela ukulungisa iKhowudi yeMpazamo 0x0003.
iindidi NDENZA njani, Tech tags Ikhowudi yeMpazamo yamava eGeforce 0x0003, Uyilungisa njani ikhowudi yempazamo 0x0003 Post yokukhangela
Yintoni iFilter yeBarbie kwiTiktok, Instagram kunye neSpapchat?
Ukwahlukana noMyeni weAloof Isahluko 35 - 36
1 icinge ngo "Ukulungiswa okukhawulezileyo kweKhowudi yeMpazamo 0x0003 yeWindows 7, 8 kunye no-10."
Disemba 8, 2020 kwi-2: 06 AM
UCharlie Wade 2411